Herrega Socho’aa Amana - Oromia International Bank
Tajaajila herrega socho’aa amaanaa jechuun maamilli kaawwatu nagummaa maallaqasaatiif baankiin wabii wabii kan kennu yemmuu ta’u maamilli maallaqa isaa yeroo barbaadu hunda ykn gar-tokkeen baafachuu kan dandeessisudha.
Amaloota tajaajila kanaafi faayidaa isaa
Tajaajilli kun kan kennamu Cheekiidhaan ta’a.
Maamilli maallaqa isaa yeroo barbaadetti kaawwachuus ta’e baafachuu ni danda’a.
Maamilli maallaqa isaa dhorkaa tokko malee kan qabu guutummaa guutuutti ykn gar-tokkeen baafachuu danda’a.
Dameewwan keenya hundatti tajaajilicha online(networkii) fayyadamuun argachuun ni danda’ama.
Gaaffii maamilaa irratti hundaa’ee ji’atti yeroo tokko ibsi sochii maallaqaa ni kennama.
Ogeessota dhimmicha irratti leenjii qabaniin gorsii fi deggersi ogummaa ni kennama.
Maamila irratti bu’aas ta’e kasaaraa hin hordofsiisu.
Hangi qusannoo xiqqaan qarshii 500(dhibba shan) qofaadha.